Af Warqo oo Ugaandha u Aaday Nabad Doon – Rasaasa News
Af Warqo oo Ugaandha u Aaday Nabad Doon
Kampala, Aug 17, 2011 [ras] – Hogaamiyaha Eritrea Isaias Afewerki oo in badan qas iyo qalalaase ka waday geeska Afrika, oo ay eegga la soo gaabatay arintaasi ayaa galabta u galbaday gayiga Ugandha isaga oo aad u dhafoor xun.
Dalka Eritrea oo xornimo ka qaatay Ethiopia sanadkii 1993, ayaa isaga oon ku nasa xornimadii uu qaatay ku bilaabay dalalka dariska ah xeri xunimo. Waxayna mudo afar sano gudaheeda dagaal la gashay dalalka Sudan, Yemen iyo Ethiopia, xili aan fogayna waxay fooda is dareen dalka yar ee ay dariska yihiin waa Jabuuti.
Dagaalka ugu xun ee is xiniinyo taabadka ah waxaa uu dhex maray Eritrea iyo Ethiopia sanadkii 1998, halkaas oo ay kumanaan ruux ku dhinteen, kaas oo markii dambe ay dhex gashay UN.
Wixii intaa ka dambeeyey Eritrea waxay noqotay dal ku caan baxay qarbudaad iyo deganaan la,aan abuur. Waxay ciidameeda galisay Somaliya iyada oo ku talo gashay in colaada iyada iyo Ethiopia u dhaxaysa ay dhaxkeento dalka aan dawlada lahayn ee Somaliya.
Xukuumada Eritrea, waxaa in badan ay dalalka Afrika iyo aduunkuba waydiinayeen in ay faraha kala baxdo arimaha dalka Somaliya. Eritrea arintaas way ka dhaga adaygtay waxayna sii waday in ay taageero hiil iyo hoo ah ay siiso ururada xag jirka ah ee Geeska Afrika, dacwado badan ka dib Eritrea waxay kasbatay in la karantiilo.
Dalka Eritrea, dhaqaalihiisu wuxuu aad ugu wiiqmay kharajyada ay siinayso ururada argagixisada ah ee ay is lahayd kula dagaalan Ethiopia. Waxay iskeed uga baxday urur gabaleedka IGAD, waxaa kale oo ay ka gaabsatay AU-da iyo aduunka Intiisa kaleba.
Dhawaan ayey ayuu golaha amaanku saaray cunaqabatayn hore leh, ka dib kolkii la xaqiijiyey in ay lacago badan iyo huba siiso Al Shabaab oo ah urur Argagax.
Dhibaatada haysata xukuumada Eritrea waxay noqotay mid ayna ku sii jiri karin, ka dib kolkii ay guul gaadhi waayeen ururadii ay taageeri jirtay, waxayna kol dhawayd codsatay in loo ogolaado in ay dib ugu laabato IGAD.
Qoraal laga soo saaray madaxtooyada Ugandha ayaa sheegay in Af warqad uu sheegay in uusan sii xamili karin dhibaatada haysata dalkiisa, uuna jecel yahay hada wixii ka dambeeya in uu nabad ka shaqeeyo, taa badalkeedana uu aduunka ka doonayo in la soo dhaweeyo lagana qaado xakamaha saaran.
Su,aasha isweydiinta leh waxay tahay Af warqad oo ah nin managada ah, dalkiisa ma ka saaridoonaa kuwa ay Ethiopia ay raacisay argagixisada ee dalkiisa jooga, mise warku waa afkiyo baarka.
Si kastaba arintu ha ahaatee waxaynu isha ku hayn doonaa in arinku daacad ka yahay Hogaamiyaha Eritrea iyo in uu maagan yaha mardabo cusub.
Xerada Qaxootiga ee Doolow Cade oo ay Dani Gaysay Dadweynaha Degaanka Somalida Ethiopia
Breakig News: Xerada Ifo oo Xalay Lagu Dilay Cabdirisaaq Tiibaa